के बेकिंग सोडा वजन घटाउन को लागी प्रभावी छ? - स्वास्थ्य प्लस म्याग - टेली रिले
के बेकिंग सोडा वजन घटाउन को लागी प्रभावी छ? - स्वास्थ्य प्लस पत्रिका
तपाईंको लुगा धुने हिउँ सेतो बनाउनको लागि, तपाईंको घर सफा गर्नुहोस् वा दाँत सेतो पार्नुहोस्, बेकिंग सोडा एक बहुउद्देश्यीय घटक हो। वेबमा, त्यहाँ धेरै लेखहरू पनि छन् जुन सोडियम बाइकार्बोनेट, जब स्यापल साइडर सिरका, कागती जुस र खाली पेटमा पियक्कडको साथ बनाइन्छ, तौल घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। अमेरिकी स्वास्थ्य पत्रिका द्वारा प्रकाशित स्वास्थ्यलाइन र पोषण विशेषज्ञ क्याथरिन मारेन्गो द्वारा मेडिकल समीक्षा गरिएको, यो जानकारीले तपाईंलाई अझ स्पष्ट देख्न मद्दत गर्दछ।
तौल घटाउन कसरी पकाउने सोडा लिनुहुन्छ?
त्यहाँ प्राय: तीन लोकप्रिय विधिहरू छन् बेकिंग सोडालाई एक वजन घटाउने तालिकामा समावेश गर्न प्रयोग गरियो। सबैभन्दा पहिले यसलाई पानीमा पातलो पार्नु हो र प्रत्येक खानुभन्दा अघि मिश्रण पिउनु हुन्छ। दोस्रोले यसलाई पानीमा पातलो पार्नु र खाली पेटमा पिउनु अघि स्याउ साइडर सिरका वा निम्बूको रससँग मिसाउने सल्लाह दिन्छ। नोट गर्नुहोस् कि यी सेता क्रिस्टलहरू पातलो गर्नु पहिले उनीहरूलाई घाँटीमा गडबडी गराउने र दाँतको तामलाई कम गर्ने जोखिममा पनी खानु भन्दा पहिले। अन्तमा, तेस्रो विधिले पानीको बेसिनमा बेकिंग सोडा खन्याएर र हरेक रात यसमा आफ्ना हातहरू डुबाएर खुट्टा नुहाउने सल्लाह दिन्छ। जबकि यी उपचारहरू धेरै व्यक्तिहरू प्रयोग गर्छन्, तिनीहरू विज्ञान द्वारा मान्य गरिएको छैन। यी अनुमानित गुणहरूलाई समर्थन गर्न त्यहाँ धेरै थोरै अनुसन्धान छ र त्यहाँ प्रभावकारी प्रमाणहरू छैनन्।
बेकिंग सोडाको फ्याट बर्न प्रभावको पक्षमा तर्कहरू के हुन्?
यदि बेकिंग सोडालाई केहि व्यक्तिले फ्याट बर्नर खानाको रूपमा लिन्छन्, यो किनभने यो क्षारीय प्रभावहरू छ जसले वजन बढाउन रोक्दछ। यद्यपि यो सिद्धान्त फेरि कुनै वैज्ञानिक तर्कमा आधारित छैन, हेल्थलाइन याद गर्दछ। र राम्रो कारणका लागि, शरीर प्राकृतिक रूपमा यसको एसिडिटीको स्तर नियन्त्रण गर्दछ। त्यसकारण हाम्रो खाने बानी शरीरको pH स्तरमा कुनै प्रभाव छैनयसद्वारा देखाईएको छ अध्ययन.
सजीलो तौल घटाउन बेकिंग सोडा स्नान लिन सिफारिसको रूपमा, फेरि, यसको प्रभावकारिताको कुनै प्रमाण छैन। यसको अधिवक्ताहरूका अनुसार बेकिंग सोडा स्नानले शरीरमा म्याग्नेशियम र सल्फेटको स्तरलाई नियन्त्रण गर्दछ, मेटाबोलिज्मलाई बढावा दिन र विष बाहिर फ्याक्सिंगका लागि आवश्यक दुई पोषक तत्वहरू। जहाँसम्म, एक छ अध्ययन जसले देखाउँदछ कि यो सेतो पाउडरले पेटको दुखाइलाई कम गर्न र ग्यास्ट्रिक एसिडिटी बिरूद्ध मद्दत गर्दछ। जबकि यसले प्रभावी रूपमा ग्याँस हटाउँदछ, यस विधिले फ्याट घाटामा कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव गर्दैन।
बेकिंग सोडाले तौल घटाउँदा अप्रत्यक्ष प्रभाव लिन सक्छ
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, बेकिंग सोडा एक्लो खपत तपाईंको वजन मा कुनै सीधा प्रभाव छैन। जे होस्, कुन सामग्रीहरूमा तपाईंले यसलाई मिश्रण गर्नुभयो त्यसमा निर्भर गर्दछ, यसले अप्रत्यक्ष रूपमा फ्याट घाटामा मद्दत गर्दछ। जब यो सेतो पाउडर उदाहरणको लागि एप्पल साइडर सिरकासँग पातलो हुन्छ। र राम्रो कारणका लागि, पछिल्लोले सहयोग पुर्‍याउँछ एक प्राकृतिक भूक दबाउनेले तृप्तिको भावना बढाउन मद्दत गर्दछ। अर्को फाइदा: एप्पल साइडर सिरकामा एसिटिक एसिड हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिड जसले बोसोलाई जलाउँछ। निम्बूको रससँगै, बेकिंग सोडाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तौल घटाउने कार्य गर्दछ। यसको डिटॉक्स गुणहरूको कारण, यो सिट्रस फल स्लिमि program प्रोग्राममा एक अनिवार्य घटक हो। थप रूपमा, दैनिक सेवन गर्दा, यी पेयहरूले शरीरलाई हाइड्रेट गर्न मद्दत गर्दछ। परिपूर्णता को भावनाहरु लाई कम गर्न, चयापचय बढाउन र फ्याट भण्डारण रोक्नको लागि एक आवश्यक कारक। संक्षेपमा, जब अन्य सामग्रीहरूसँग पातलो हुन्छ, बेकिंग सोडाले अप्रत्यक्ष रूपमा वजन घटाउन प्रोत्साहित गर्दछ। अर्कोतर्फ, यी सेता क्रिस्टलहरूले शरीरको फ्याट संचयको बिरूद्ध लडाईमा भाग लिन्छन् भनेर प्रमाणित गर्न धेरै थोरै वैज्ञानिक डेटा अवस्थित छ।
बेकिंग सोडा खपतबाट कुनै स्वास्थ्य जोखिमहरू छन्?
बेकिंग सोडा स्वास्थ्य जोखिम पैदा गर्दैन। यद्यपि अधिक मात्रामा उपभोग गर्दा पछिल्लो धेरै साइड इफेक्टसँग सम्बन्धित छ, मेटाबोलिक एसिडोसिस सहित उच्च रक्तचाप र सास फेर्न गाह्रो समस्यालगायत। बेकिंग सोडा पनि केहि औषधी संग अन्तरक्रिया गर्न सक्छ। यसलाई तपाईंको आहारमा समावेश गर्नु अघि, यो आवश्यक छ पहिल्यै डाक्टरसँग छलफल गर्नुहोस्।
कसरी स्थायी र स्वस्थ तरीकामा वजन कम गर्ने?
स्वस्थ तरीकाले तौल गुमाउनको लागि छिटो तौल घटाउन आवश्यक पर्दैन। यसको लागि नियम तपाईले खर्च गर्नु भन्दा कम क्यालोरी खपत गर्नु हो। तपाईको क्यालोरी ईन्टेक्ट कम गर्नाले र नियमित शारीरिक गतिविधिमा भाग लिन तपाईंलाई अनुमति दिनेछ वजन घटाउन अनुकूल क्यालोरी घाटा सिर्जना गर्नुहोस्। जबकि एक सन्तुलित आहार खान आवश्यक छ, निराशा बाट जोगिन सफल वजन वजन को लागी आवश्यक छ। तपाईं क्यालोरी-गणना हुन वा प्रतिबन्धात्मक आहार मा टाँसनु आवश्यक छैन। स्वस्थ आहारमा अडिग रहनुहोस् र खाद्य पदार्थहरूको प्रमोट गर्नुहोस् जसले पूर्णताका भावनाहरू ट्रिगर गर्दछ र कम पोषण मूल्यको साथ खनिज बनाउँदछ, विशेष गरी चिनी र फ्याटमा उच्च खाना।
मनपर्ने खानाहरू र स्वस्थ वजन घटाउन को लागी बेवास्ता गर्न के खानाहरू छन्?
चाँडै र राम्रो वजन कम गर्न, केहि खाना मन पर्छ। यी हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरूले भरिएका छन् र तपाइँलाई तपाइँको आदर्श वजनमा पुग्न मद्दत गर्दछ। फेरी, खाद्यान्नको लालसामा पुग्न सक्ने निराशाहरूबाट बच्न, तपाईंको सन्तुलन देखाउन महत्त्वपूर्ण छ। आफैलाई बेवास्ता नगरी, कम पोषक आहारहरूको अंश कम गर्नुहोस् र प्रोटीन र भिटामिनहरूमा समृद्ध ती मानिसहरूलाई बढाउनुहोस्। मासु, माछा, अण्डाहरू, फलफूल र तरकारीहरू सबै खानाहरू हुन् तपाईको प्लेटमा आमन्त्रित गर्नका लागि राम्रो बोसो जलिरहेको। तपाइँको कार्बोहाइड्रेट र फ्याटको सेवन सीमित गर्नु, जसमा प्रशोधन गरिएको खाद्य पदार्थ, प्रशोधित जुस, सोडास, र सेतो आटा अधिक वजन र मोटाई बिरूद्ध लड्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।
के खेल खेल्नाले प्रभावी तौल घटाउन मद्दत गर्दछ?
यो भनिन्छ कि वजन घटाउने प्रक्रियामा, भोजनले success०% सफलता र खेल 70०% प्रतिनिधित्व गर्दछ। एउटा सानो सेयर, तर कम आवश्यक छैन। र राम्रो कारणको लागि, अधिक तपाईं शारीरिक गतिविधि अभ्यास अधिक तपाईं ऊर्जा खर्च ट्रिगर र त्यसैले वजन कम छ। यसको लागि, तपाईंले आफ्नो सास गुमाउन्जेल दगुर्नु आवश्यक पर्दैन, दिनमा minutes० मिनेट हिंड्नु पर्याप्त हुन्छ र धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्। तपाइँको बानी र तपाइँको शारीरिक रूप लाई अनुकूलित खेल खोज्नु आवश्यक छ। यसबाहेक, एक अनुसार डेनिश अध्ययनप्रति दिन minutes० मिनेटको खेल खेल्दा वजन घटाउनमा बढी प्रभावकारी हुन्छ प्रति दिन १ घण्टाको खेल गतिविधिको अभ्यास गर्नु भन्दा। यस निष्कर्षमा पुग्न, अन्वेषकहरूले १ 30 हप्तासम्म over० बढी वजनको अनुसरण गरे। परिणाम: participants० मिनेट अभ्यास गर्ने अध्ययन गर्नेहरूसँग १ घण्टा अभ्यास गर्ने भन्दा बढी ऊर्जा स्रोतहरू थिए। उक्त अध्ययनका सह-लेखक एस्ट्रिड जेस्परसन बताउँदछन्, "उनीहरूको सत्रपछि थकित महसुस भयो, डेमोटिभेट र परिवर्तनको लागि कम खुला", अध्ययनका सह-लेखक एस्ट्रिड जेस्परसन बताउँदछन्। लामो अवधिमा वजन कम गर्न, मध्यम गतिविधि पर्याप्त छ।
यो लेख https://www.santeplusmag.com/le-bicarbonate-de-soude-est-il-efficace-pour-perdre-du-poids/ मा पहिलो पटक देखा पर्‍यो
एन्जेलिना जोलीसँग बच्चाहरू - भिडियोको साथ लगातार किनमेलका मितिहरू पछि विशेष कारण छ
समर्थक Gbagbo निर्वासनहरूको फिर्ती - Jeune Afrique